Al-Shabaab oo xalay Saqdii dhaxe Weerar ku qaaday magaalada Mandheera+ VIDEO+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al-Shabaab oo xalay Saqdii dhaxe Weerar ku qaaday magaalada Mandheera+ VIDEO+SAWIRRO
Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhaxe weerar qaraxyo iyo mid toos ah isugu jira waxa ay ku qaadeen xaafado katirsan Magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi bari dalka Kenya.
Dabley hubeesan ayaa weerar ku qaaday xaafado katirsan magaalada Mandheera ay dagan yihiin dadka kenyanka ah , waxaa weerarkaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii la weeraray.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in ay maqleen ku dhawaad shan qarax iyo rasaas , waxaana dableyda hubeesan ay si gaar ah u weerareen xaafado katirsan magaalada Mandheera ay ku tuhmayeen inay dagan yihiin dad Kenyan ah oo heesta Diinta Kirishtaanka.
Ku dhawaad 12-qof ayaa lasoo warinayaa in weerarkaasi isugu jira qaraxyada iyo midka tooska ay ku dhinteen, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay dad kale, kuwaa oo xarumaha caafimadaka lagu daweenayo.
Taliyaha ciidamada Booliska Magaalada Mandheera Job Boronjo ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay weerarka xalay ka dhacay magaalada Mnadheera, mana uusan sheegin taliyaha Qasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi ka dhashay.
Magaalada Mandheera waxaa kuoo badanaya weerarada ay geestaan xubno katirsa Xarakada Al-Shabaab, waxaana maalmo kahor weerar ka dhacay isla Mandheera lagu dilay dhoor qof oo Kenyan ah .
HALKAN KA AQRI WARKAN OO FAHFAAHSAN